प्रचण्ड मुम्बई गएको मौकामा चौका हान्न प्रधानमन्त्री ओलीले बनाए यस्तो मास्टरप्लान : के गर्लान नेपाल र खनाल ? - Sacho Post
प्रचण्ड मुम्बई गएको मौकामा चौका हान्न प्रधानमन्त्री ओलीले बनाए यस्तो मास्टरप्लान : के गर्लान नेपाल र खनाल ?
२०७७ पुष २३, बिहीबार ०८:५० बजे
काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गएको मौकामा चौका हान्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा जति नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुलाई गालीगलौज गरेर उडाए पनि नेकपा विभाजन भएकोमा ओली निकै निराश र खिन्न रहेको उनी निकट नेता बताउछन्।
खासगरी पूर्वएमालेको ठूलो पंक्तिले आफूलाई छाडेपछि ओलीमा चिन्ता बढेको हो । पार्टीका युवा नेता र तटस्थ बस्दै आएका नेताहरूले पूर्वएमालेलाई फर्काउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएपछि बालुवाटारले नयाँ मास्टर प्लान बनाएको छ।
स्रोतका अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि भारत गएको मौका पारी बालुवाटारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको हो । त्यसको संकेत सोमबार नै देखिइसकेको छ। ओली निकट नेताहरु ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेलले क्रमशः सिरहा र चितवनमा पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरुको मात्र आलोचना गरेको, पूर्वएमाले पक्षका नेताहरूबारे उच्चारणसमेत गरेनन्।
पहिलो पटक शा’री’रि’क स,म्पर्क राख्दा अनिवार्य अपनाउनु पर्ने बिधि ! – के तपाइले यी बिधि अपनाउनु भयो . .